Noraràn'i Italia ny tsenan'ny Krismasy noho ny tahotra COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Noraràn'i Italia ny tsenan'ny Krismasy noho ny tahotra COVID-19
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao farany Italia • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Anisan'ireo lalàna vaovao tao amin'ny didim-panjakana farany tamin'ny 3 novambra 2020, ilay nampizara an'i Italia ho faritra mena, volomboasary sy mavo, dia misy fandrarana miharihary ny fanokafana sy ny fanaovana tsena krismasy - iray amin'ireo fankalazana ny Noely efa ela fomban-drazana, loharanom-barotra sy fifaliana ho an'ny ankizy.
Ireo hetsika ireo, tanterahina ivelan'ny hetsika ara-barotra mahazatra amin'ny habakabaka natokana ho an'ny tsenambarotra mijanona na tsindraindray, dia tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny vidin'ny varotra, noho izany voarara. Ity fepetra ity dia mihatra amin'ny faritany italiana iray manontolo.
Ny fameperana ampiana dia mampihena ny mpandraharaha mpizahatany sy ny masoivohon'ny fizahan-tany vokatra hafa manan-danja ary ampahany lehibe amin'ny fandaminana isan-taona ny fizahantany voalamina.
Araka ny angon-drakitra statistikan'i Confesercenti, tsena Krismasy 560 mahery natsangana tany Italia, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahatratra 13 tapitrisa ny mpitsidika namokatra vola mitentina 780 tapitrisa euro mahery, ary nahitana ny asan'ireo mpampiranty 28, indrindra ireo mpivarotra amoron-dalana , mpanao asa tanana ary mpiasan'ny dia.
Ary nahazo tombony ara-bola lehibe ihany koa ireo toerana isan-karazany nampiantrano an'ireo tsena fiantsenana mialoha ny Krismasy ireo, ary koa nanome ny fialamboly ho an'ny ankizy.